Alan Wake 2 - Ny Fantatsika Hatreto - Lalao
Alan Wake 2 – Ny Fantatsika Hatreto
Daty famoahana Alan Wake 2
Ny Alan Wake tany am-boalohany dia nipoitra folo taona lasa izay ary nifarana tamin'ny hantsana mampihoron-koditra indrindra azo eritreretina. Folo taona taty aoriana, nahita ny lalan'i Alan Wake 2 tao amin'ilay lavaka nisy an'i Alan Wake.
Toa i Alan Wake 2 no lalao mampihoron-koditra voalohany ho an'ny Remedy, ary raha ny orinasa dia tsy mihevitra ny lalao voalohany ho lohatenin'ny horohoro velona, ​​​​dia fanantenana mampientam-po sy mampatahotra izany. Efa fantatsika betsaka momba an'i Alan Wake 2 noho ny tranofiara teaser voalohany, izay nanambara ny niafaran'ny lalao teo aloha sy ny fomba ifandraisan'ny Control's AWE DLC amin'ny tantara ankapoben'ilay andiany.
Ity pejy ity dia mirakitra ny fampahalalana rehetra fantatsika momba an'i Alan Wake 2, ao anatin'izany ny daty famoahana, tantara, lalao ary izay mety ho olon-dratsy mety hiseho.
Tsy manana daty famoahana manokana an'i Alan Wake 2 izahay, saingy fantatray fa hivoaka amin'ny 2023 izy io, izay tsy dia lavitra loatra amin'ny ho avy. Eny, mety ho elaela ihany izany ho an'ireo izay niandry folo taona mahery, fa vao haingana aho no nahavita ny lalao, ka nahafinaritra (hah).
Alan Wake 2 amin'ity taona ity dia azo alaina amin'ny PlayStation 5, Xbox One X ary Xbox One S, ary koa ny PC. Fantatray izao fa ny fampahalalana bebe kokoa momba ny Alan Wake 2 dia havoaka amin'ny fahavaratra amin'ny 2022, noho ny fanambaran'i Sam Lake.
Miaraka amin'ny tenifototra Monsters manao endrika maro, Remedy dia maneso antsika amin'ny soso-kevitra vitsivitsy momba izay azontsika antenaina amin'ny Alan Wake 2. Voalohany indrindra, raha nahavita ny manontolo ny Alan Wake (anisan'izany ny DLC) sy ny Control (anisan'izany ny DLC) ianao. , ho fantatrao fa mbola voafandrika ao amin'ny toerana maizina i Alan (Alan Wake's American Nightmare angamba tsy canon).
Mbola any ivelany ny double an'i Alan Wake, Mr. Scratch, izay mety midika fa ankoatra ny fandosirana ny toerana maizina sy ny fiatrehana an'i Mr. Scratch, dia tsy maintsy miatrika an'i Mr. Scratch i Alan raha teo am-pandosirana avy ao amin'ny Farihy Cauldron. Ny porofo iray hafa fa Andriamatoa Scratch dia ilay mpanohitra dia tonga amin'ny endrika fitsambikinana ao amin'ny tranofiara, izay mampiseho an'i Alan Wake miaraka amin'ny nify mibaribary sy feno rà. Mazava ho azy fa tsy Alan Wake (farafaharatsiny tsy amin'ity tranga ity), ary izany, raha ny marina, Mr. Scratch.
Ao amin'ny tranofiara teaser, hitantsika ihany koa ny fahatapahan'ny maso mitsambikina eo anelanelan'i Bright Falls sy New York City, izay milaza fa ireo no toerana roa izay hitrangan'i Alan Wake 2. Satria i Alan Wake dia avy any New York City sy ny lalao tany am-boalohany. Tao amin'ny Riandranon'i Bright, dia tonga lafatra izany. Tsy misy na inona na inona hahafaly ahy kokoa noho ny hoe afaka mihazakazaka amin'ny tontolo manodidina an'i New York City.
Jereo koa : Bayonetta 3: Daty Famotsorana, kilalao ary ireo lesoka sy tsaho rehetra!
Inona no dikan'ny filazalazan'i Remedy momba an'i Alan Wake 2 ho lalao mampihoron-koditra velona amin'ny resaka lalao raha ampitahaina amin'ny lalao tany am-boalohany dia tsy mazava. Satria ny karazana dia mety tsy mazava loatra, raha manontany olona roa samihafa ianao dia hahazo valiny roa samy hafa tanteraka. Saingy nifikitra tamiko ianao, koa mahareta amiko raha manazava ny fanoharako aho.
Mba hanaovana fampitahana tsara, alaivo sary an-tsaina i Alan Wake ho Resident Evil Village sy Alan Wake 2 ho Resident Evil 7. Raha mpankafy Resident Evil ianao dia azonao atao ny mieritreritra an'i Alan Wake ho Resident Evil 7. Tsy toy ny taloha, izay hetsika bebe kokoa. - feno, ity farany dia mampatahotra ary mitaky anao hiasa mafy kokoa ho an'ireo loharano fanampiny ireo. Izany no eritreretiko ho toy ny tetezamita, na dia mino aza aho fa Alan Wake 2 dia ho mampatahotra kokoa noho ny ankamaroan'ny lalao Resident Evil amin'ny resaka fampihorohoroana. Ity trailer ity dia manana toetra mahasosotra azy. Hisy ihany koa ireo singa mampihoron-koditra ara-tsaina, araka ny voalazan'i Remedy, izay nanoratra momba izany tao amin'ny bilaoginy.
Raha tsy misy zavatra hafa, manantena aho fa hahazo fitaovam-piadiana isan-karazany isika ary mihatsara be ny lalao. Amin'ny maha olona vao nahavita an'i Alan Wake dia afaka milaza aho fa efa lany andro ny lalao. Tokony ho afaka mitsambikina mihoatra ny roa segondra i Alan, ary mitaky rafitra fanisana miasa maika izahay. Satria nozaraina ho fizarana ny tany am-boalohany, dia voatery nandao ny jirony sy ny basy io mpanoratra kidaladala io isaky ny misy zava-dratsy mitranga amin'ny fandaharana.
Ny fahatsapanay voalohany momba an'i Remedy dia ny teaser trailer dia mampiseho fahaiza-manao sary manaitra ho an'ny mpitifitra olona voalohany. Mahafinaritra ny mahita an'io haavon'ny tsy fivadihana io amin'ny cutscenes, na dia voalaza mazava aza fa tsy ao anatin'ny lalao mihitsy.
Jereo koa : Dying Light 2 (Cloud Version) ho an'ny Nintendo Switch nahemotra
Ny fepetra takian'ny PC ho an'ny Alan Wake 2 dia tsy mbola navoaka, fa mifototra amin'ny fepetra takian'ny PC Control, dia mety ho afaka hahazo hevitra tsara momba izay takian'ny lalao isika.
Ny fanaraha-maso dia nitaky anao hanana Intel Core i5-7600K na AMD Ryzen 5 1600X processeur, 16GB an'ny RAM, ary Nvidia GeForce GTX 1660/1060 na AMD Radeon RX 580 AMD GPU mba hihazakazaka amin'ny filaharana atolony. Remedy dia manoro hevitra ny RTX 2060 GPU hampiasaina amin'ny Ray Tracing. Mety ho afaka milalao Alan Wake 2 miaraka amin'ny GPU RTX 3060 ianao raha mampiasa ny iray amin'ireo solosaina finday mora indrindra, izay afaka mihazakazaka manodidina ny fifaninanana.
Jereo koa : Marvel's Midnight Suns: Inona no fantatsika hatreto!
Izay ny momba an'i Alan Wake 2. Aza adino ny fanavaozana bebe kokoa ary mariho ny tranokalanay ho an'ny vaovao bebe kokoa. Misaotra Mamaky!
Moon Knight: Rahoviana no hivoaka amin'ny Disney Plus?
kaody playstation maimaim-poana tsy misy fanadihadiana
inona ny fandaharana amin'ny fahitalavitra streaming
anime tsara hojerena amin'ny hulu
emulator android maimaim-poana tsara indrindra ho an'ny windows
afaka milalao roblox amin'ny chromebook ve aho?